ISKU DAY LA DOONAYAY XILKA IN LAGAGA QAADO GUDOOMIYAHA GUURTIDA OO FASHILMAY | Toggaherer's Weblog
Lynndie England iyo Fadeexadii Xabsi ga Abu-Quraib ma xasuusataa?
ISKU DAY LA DOONAYAY XILKA IN LAGAGA QAADO GUDOOMIYAHA GUURTIDA OO FASHILMAY
Guddoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa maanta gaashaanka ku dhuftay muddo kordhin uu sheegay in Xukuumadda Madaxwayne Riyaale ka doonayso Golaha Guurtida.
Mudane Saleebaam Maxamuud Aadan waxa uu sidan ka sheegay fadhigii maanta ee golaha guurtida oo la filayay in la soo hor dhigo mooshin xilka lagaga xayuubinayo shir-guddoonka Golahaasi, kaas oo fashilmay markii goluhu furmay, waxaanu sheegay guddoomiyuhu in doorashadu ay ku qabsoomayso wakhtigii loo cayimay oo ah 29-ka March, isla markaana aanay jiri doonin wax muddo kordhin ah oo uu golahiisu samayn doono.
Saleebaan Maxamuud Aadan waxa kale oo uu Madaxwayne Riyaale u soo jeediyay in uu ku dhawaaqo maalinta doorashdu dhacayso oo uu ku soo saaro wareegto rasmi ah, “Madaxtooyadu xilkeeda ha ka soo baxdo, hawlo badan baa u yaala fulinta, meeday doorashadii? meeday diwaangelintii? doorashadii 29-ka March ayaa loo mudeeyay 45 cisho ka horna waa in lagu dhawaaqaa maalinta ay dhacayso oo digreeto lagu soo saaraa.” ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Guurtidu, waxaanu intaa ku daray “Madaxwaynaha iyo Madaxwayne ku xigeenka 5 sanno ayaa la doortay, 7 sanno ayay marayaan, waa muddo kordhintii saddexaad ta maanta la meermeerinayaa, waa xilgudasho la’aan, wax la kordhinayaana ma jiraan ee doorashadu wakhtigeedii bay ku dhacaysaa.”
Guddoomiye Saleebaan waxa uu Komishanka Doorashooyinka Qaranka u soo jeediyay in ay doorashada wakhtigeedii ku qabtaan, isla markaaana ay si dhakhso ah u jaan-gooyaan muddadeeda una gudbiyaan Madaxwayne Riyaale.
“Ma garanayo Komishanka waxa haysta, Komishanku ha gooyo wakhtiga doorashadu dhacayso, madaxwaynaha ha u gudbiyaan, isaguna wareegto ha ku soo saaro. Komishanku wuu qaban karaa doorashada, waxayse inooga baahan yihiin kalsoonideena ee aynu siino”. Ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Guurtidu.
Guddoomiyaha golaha guurtida Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan waxa kale oo uu Axsaabta Qaranka ku dhiiri-geliyay in ay u diyaargaroobaan Doorashada, lana shaqeeyaan Komishanka.
“Axsaabta Qaranku waajibkooda ha gutaan, ha u diyaargaroobaan doorashada, Komishankana ha la shaqeeyaan.” Ayuu yidhi Mudane Saleebaan.
Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu Ciidamada Qaranka ee kala duwan ugu baaqay in ay dhex u noqdaan madaxda qaranka iyo Axsaabta. “Waxaan leeyahay ciidamada qarankoow, madaxda qaranka dhex baad u tihiin, doorashada dhex baad u tihiin, ilaalinta madaxda ayaad dhex u tihiin. Madaxda ciidamada waxaan leeyahay qaranku madax badan buu leeyahay ee laba qudha maaha.” Ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Mudane Saleebaan waxa uu dadwaynaha ugu baaqay in ay nabad-gelyadooda ilaashadaan, una diyaargaroobaan doorasho xor ah oo xalaal ah oo aan ku noqnoqosho lahayn, isaga oo arrimahaa ka hadlayana waxa uu yidhi “Dadwaynow waajib baa idinka saaran dalka, nabadgelyadiisaa waajibka koobaad idinka saaran yahay, waxaan leeyahay dadwaynow nabadiina ilaashada, xuquuqdiinana ilaashada.”
Ugu dambayntii Guddoomiyaha Golaha Guurtida Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu baaq u diray wadamada deeq bixiyayaasha ee Somaliland ka taageera arrimaha Dimuquraadiyadda iyo Doorashooyinka, waxaanu yidhi “Wadamada deeq bixiyayaasha waxaan ka codsanayaa in ay sidii ay tii hore u maal-geliyeen, tana u maal geliyaan.”